I-Android kwi-PC yakho: Ekugcineni. | Kusuka kuLinux
Sihlale siphupha ngokuba nedivayisi nge Android ukuyizama futhi ujabulele izinzuzo zayo, kepha ngezizathu ezingasasebenzi manje, awekho amalungu e <° I-Linux sikwazile ukuthola noma iyiphi ifoni ephathekayo ngalokhu OS.
Kepha nge- I-linux kakhulu Ngithola ukuthi sesivele sinakho Android ku-PC yethu, ucezu lwezindaba enginesiqiniseko sokuthi luzokwenza abaningi bajabule, kuhlanganise nami. Le nguqulo ye-Android isuselwa egatsheni Isinkwa se-Gingerbread se-Android 2.3.5 futhi iguqulelwa ekusebenzeni kumakhompyutha anezinhlamvu ze-X86.
Zifaka ziphi izindaba?
I-Kernel 2.6.39.4 con I-KMS inikwe amandla, kuvumela ama-netbook ukuthi asebenze I-Android-x86 ngokulungiswa komdabu.
Ukusheshiswa kwehadiwe I-OpenGL ama-chipsets Intel y AMD Radeon.
Ukuxhaswa WiFi y I-Ethernet
Isifaki esisha sokuqhafaza esisekela ukwahlukaniswa ext2 / ext3 / ntfs / fat32.
Ukusekelwa kwamadrayivu angaphandle USB namakhadi I-SD.
Kungezwe isikhombisi segundane lesoftware, futhi isondo legundane nalo liyasekelwa
Ukulanda isos kungatholakala ku- lesi sixhumanisi. Esihlokweni se- I-linux kakhulu, basishiya isithombe-skrini se- Android egijima kwi-PC 😀
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Android kwi-PC yakho: Ekugcineni.
Ngidinga usizo oluthile ngapha!
Noma yimuphi umbono wokuthi ungayilungisa kanjani inethiwekhi ye-ethernet enentambo (RJ45) ku-Android 2.2….?